Momba anay | Huai'an Ruisheng International Trade Co., Ltd.
Huai'an RuiSheng Garment Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2010, dia orinasam-barotra vahiny manafatra sy manondrana varotra any amin'ny faritany Huai'an Jiangsu, Sina, manakaiky ny 3500sqm, atrikasa manara-penitra 1100sqm, ary mety mitazona olona 1500 hiasa, izay iray amin'ireo akanjo lehibe orinasa ao Huai'an. Tamin'ny Jona 2018, nahomby ny orinasa nandalo ny fanamarinana iraisam-pirenena BSCI. Manana orinasa 2 manokana izahay ao Huai'an, iray no antsoina hoe RuZhen manampahaizana manokana ao amin'ny T-Shit, Polo, Pants, Shorts, Sportwear, Jaket, Coat, iray hafa antsoina hoe Haolv matihanina amin'ny Bedding Set, Quilt, Pillow, Mattress, Decoration.
Ireo mpiara-miombon'antoka aminay dia mandrakotra marika 400 any amin'ny firenena 30 manerana an'izao tontolo izao hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa rehetra manana kalitao avo lenta, ary nahazo fiderana avo tsy tapaka avy amin'ny mpanjifa hatramin'ny nananganana azy. Ny orinasa dia mitazona ny hevitry ny fitantanana fa "Ny toetra manaporofo ny tanjaka, ny antsipiriany dia mahatratra ny fahombiazana", ary miezaka tsara ny manao tsara amin'ny lafiny rehetra isaky ny zaitra, ny teboka tsirairay amin'ny fomba famokarana ka hatramin'ny fizahana farany, famonosana ary fandefasana. Izahay dia manizingizina ny fitsipiky ny fampandrosoana ny "kalitao avo lenta, Fahombiazana, Eincerity ary ary Down amin'ny tany fomba fiasa" hanome anao asa fanompoana tsara indrindra amin'ny fanodinana! Manasa anao indrindra izahay hitsidika ny orinasa anay na hifandraisa anay amin'ny fiaraha-miasa!
Ny tsipika famokarana fitafiana fitotoana lehibe dia manana rafitra 200 amin'ny fananganana an-trano mandroso vita amin'ny trano anatiny, ary ny fitaovana rehetra dia vita; manana mpiasa 180, ahitana mpiasa an-jiro 100 manjaitra, mpiasa 20 manjaitra, mpiasa mpanao fonosana 40, ary mpiasan'ny teknika hafa.
tamin'ny 2011, ny tsipika famokarana akanjo nataon'ny orinasa nifindra tany amin'ny valan-javaboary. Ny faritra maniry vaovao dia manana tontolo iainana tsara, famokarana tanteraka, fiainana, fiarovana ary famonoana afo. Ny orinasa dia mihevitra ny mpiasa ho harena lehibe indrindra amin'ny orinasa, ary manana tontolo ara-kolontsaina sy kolotsaina orinasa.
Uisheng International Trade Co, LtdOriginated tamin'ny 1999, orinasa kely iray misy olona maherin'ny ampolony manampahaizana amin'ny fanodinana ivelany ny akanjo.Aran'ny taona 20 aorian'ny fampivoarana ， izao dia mahay mamorona, mamolavola, mamokatra akanjo sy lamba .Izao izao dia orinasa vita amin'ny lamba sy orinasa fanodinana akanjo vita amin'ny fahana sy manenona ， Manana teknolojia mahaleo tena momba ny kalitao fanaraha-maso momba ny kalitao.Misy mpiasa 200 mahery misy. Varotra isan-taona mitentina 5 tapitrisa dolara amerikana.
Vokatra ao an-trano: T-shirt, lobaka Polo, fanatanjahan-tena vita amin'ny fanatanjahan-tena an-dehilahy sy vehivavy, akanjo landihazo ho an'ny lehilahy sy vehivavy, akanjo ba miakanjo lava, akanjo ivelany, akanjo mahazatra ary andian-karazany 100 isan-karazany.